China Vatsva vanosvika ai authomatic 360 apai genie chinhu kamera kumeso auto yekutevera smart kupfura mira nhare mbozha inobata Kugadzira uye Fekitori | VhidhiyoBhurocha
Vatsva vanosvika ai authomatic 360 apai genie chinhu kamera kumeso auto yekutevera smart kupfura mira nhare mbozha inobata
1. Auto Tracking Selfie Mira - Chiso & Chinhu chekutevera, chaiyo-nguva yekuvavarira kukiya, sekureba sekusarudza tarisiro mukamera interface, iyo stand ichatevera tarisiro yekupedzisa akawanda maficha ekupfura.
2. 360 ° risingaperi kutenderera - Horizontal 360 degree kutenderera mubati, otomatiki kuteedzera pasina akafa angle.Kusanganiswa kwemufananidzo kudzikamisa masisitimu uye komputa yekuona algorithm inoita kuti iko kutaridzika kuve nyore.
3. Yakareba Inoenderera Kushanda - Chizvarwa chitsva cheyakanaka simba-yekuchengetedza algorithm, inosanganisirwa ne-Ultra-yakadzika simba Bluetooth 5.0 chip, ichipa iyo 50-awa inoenderera inoshanda nguva yekushanda. Vimba neyakareruka yeAA mabhatiri, hauzombopotsa pfuti kana kutora.
4. Simple Operation - Otomatiki kubatana pasina kunyoresa uye kwakaomarara tutorials. Ingoshandisa nharembozha kurodha pasi software APAI GENIE wovhura, wobva waramba wakabata [Power On] kiyi mustand kwemasekonzi mashanu, inobatana otomatiki. (Tsigiro system iOS 10.0 uye itsva vhezheni, Android 8.1 uye new vhezheni).
360 degree rotationg auto yekutevera smart AI chinzvimbo nhare mbozha
Tsigira saizi yefoni
360 degree risingagumi yakatenderera yakatenderera
37 degree yakatwasuka flip kumusoro
37 degree yakatwasuka pasi
3pcs 1.5V alkaline yakaoma mabhatiri
IOS 10.0 uye yepamusoro & Android 8.1 uye yepamusoro
Chinhu chinoteedzera nzira, kumeso yekutevera modhi Kudzora foni smart kutevera kupfura
1. Q: Kambani yako inoita sei zvine chekuita nekutonga kwemhando yepamusoro?
A: Isu tinoita katatu kuomarara mhando kudzora kuongorora usati watumirwa kuti uve nechokwadi chemhando yepamusoro.
2. Q: Unogona kugamuchira madhizaini madiki?
A: Ehe, madhizaini madiki anogamuchirwa. Ingotizivisa kuti mangani zvidimbu zvaunoda.
3. Unogona kudhinda logo pane chigadzirwa? Kunamatira chitaridzi uye kutumira kuAmazon FBA imba yekuchengetera?
Tinogona kupurinda logo yako pachigadzirwa nesirika-screen kudhinda uye kudhinda laser kune yako sarudzo.Tinogona kunamatira chitaridzi pane chigadzirwa uye kutumira kuAmazon FBA imba yekuchengetera zvakananga.
4. Q: Ndinoda kushanyira zvigadzirwa zvako zvazvino uye makotesheni, ndingaawana sei?
A: Tinogamuchirwa kuti utitane nesu zvakananga ne online messenger, kubvunza kana Whatsapp yezvino zvinyorwa. Titumirei kubvunza kana kunanga email kunogamuchirwa zvakare.
5. Sei Uchisarudza Zvigadzirwa Zvedu?
1.Giredhi Yakakwirira AAAA Hunhu.
2. Mutengo wefekitari.
3. Neyehunyanzvi bvunzo bvunzo, inoongororwa nehunyanzvi QC timu.
4. Chitsva chinochinja chigadzirwa uye inopisa-kutengesa modhi kusimudzira kazhinji.
5. Kutumira nekukurumidza.
Pashure: Android Hwendefa 10 inch Quad Core 1GB + 16 GB / 2GB + 32GB Hwendefa PC Ine Runhare Kufona Hwendefa Tsigiro OEM Yakasarudzika Brand
Zvadaro: Macaroon A6s Wireless Nharembozha YeRedmi Airdots Earbuds Bluetooth 5.0 TWS mahedhifoni Ruzha Kukanzura Mic ye Smartphone
Auto Smart Kupfura Selfie Tsvimbo
Auto Kutevera Smart Kupfura Runhare Inobata
Smart Auto Kupfura Runhare Inobata
Yakagadziriswa 7 padiki LCD skrini mwenje kudzora musi ...
Tsika Kukwazisa Makadhi 7inch Kushambadzira LCD Kadhi ...